နေအိမ် | Wanzhanxing Apparel
ကိုယ်0န်ဆောင်မှုစလစ်စားဆင်ယင်
Wanzhanxing အဝတ်အထည်သည်အကောင်းဆုံးသော shapewewewewewewewear ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ချောမွေ့စွာအဝတ်အစားများ, shapewear, စိတ်ကြိုက် Attewear, Slippear0တ်စုံနှင့်မီးဖွားလုပ်ငန်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင် Shapewewear0တ်စားဆင်ယင်ခြင်း, shapewear thong, control panties, shapewear bodysuit, shapewear bodysuits, အားကစားဘရာစီယာနှင့်အားကစားဘရာကျွေး ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ODM ကိုပေးနိုင်သည်& OEM ဝန်ဆောင်မှု။
WZX အမျိုးသမီးများနေ့ Shapewear ပေးသွင်း Tummy ထိန်းချုပ်ရေးပါးလျသောခန္ဓာကိုယ် Shaper စိတ်တိုင်းကျစေ
အမျိုးသမီးခါးပတ်ကိုအပြည့်အ0ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ full ာန်အပြည့်အ0အလျင်အမြန်ဤပါးလွှာသောခန္ဓာကိုယ်သာယာသောပုံစံကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသော elastic, sheky, သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအသက်ရှူနိုင်သောထည်, ဤပုံမှန် bodicalsuit သည်တစ်နေ့လုံးဝတ်ဆင်နိုင်ပြီးပြီးပြည့်စုံသောခါးနှင့်တင်ပါးဆုံရိုးကိုအလွယ်တကူပုံဖော်နိုင်ပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို0တ်စုံ, ပုံဆွဲဆောင်မှုအောင်။
WZX အမျိုးသမီးများနေ့ Compression ကို Tummy ထိန်းချုပ်ရေးချောမွေ့စွာ Bodysuit လက်ကား Shapewear ပေးသွင်း
WAILSTARESASTASTASTERGEART TOPS သည်ခန္ဓာကိုယ်ဖြူဖွေးထွေးမှုကိုချောမွေ့စွာ Sexy Video Sexy Video Sexy Video letard lettersuitအမျိုးသမီးများအတွက်လက်အိတ်မရှိသောကိုယ်ထည်ဆိုင်ရာ0န်ဆောင်ဝတ်စုံများကို အသုံးပြု. အထူးလက်ရာလက်မှုဝေဖန်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။& ဝမ်း& နောက်ကျော, သင်၏ tummy ကိုတင်းကျပ်စွာတင်းကျပ်စွာပြန်တင်းကျပ်စွာ, နှစ်ဖက်စလုံးမှအဖုနှင့် bulges များကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးမှသင့်ခါးကိုပါးလွှာအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဘရာစီယာရှိအမျိုးသမီးများအတွက်ဤချောမွေ့သောကိုယ်ထည်သည်ဂန္ထဝင် v-tuch ဒီဇိုင်း, သင်၏ကော်လိုင်း, ရင်သားနှင့်မျက်နှာသည်ကောင်းမွန်စွာဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်။ အမျိုးသမီး0တ်လက်ပြတ်ထိပ်များသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘရာစီယာနှင့်အတူ0တ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရင်ဘတ်၏လိုင်းကိုရုပ်သိမ်းရန်နှင့် Sexy နာရီနာရီကိုပြသသည်။
WZX Maternity Shaper Batly OEM ODM OEM OEM
အမျိုးသမီးများ၏မီးဖွားချောင်းမှုသည်ချောမွေ့မှုမြင့်မားသောကိုယ်0န်ဆောင်မှုအတွင်းခံအဝတ်အစားများဤမီးဖွားသည့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောကိုယ်ဝန်ရှိသည့်ကိုယ်ဝန်ရှိသည့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သံထည်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖြည့်တင်းသောအ0တ်အထည်များအရချောမွေ့စွာဖြင့်ချောမွေ့စွာဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်အောက်တွင်ရှိသည်။ ကြီးထွားလာသည်။ soft နှင့်သားဖွားစားဆင်ယင်အတွက်မမြင်နိုင်သောအသားအရေ-friendly နိုင်လွန် shapewear panties, တင်းကြပ်စွာကိုယ်ဝန်နျြးမာရေးအတှကျ secure ။ Mama သည်မည်သည့်အရေးပါသောအခါသမယ, ကလေးရေချိုးခန်း, သားဖွားဓါတ်ပုံများ,
WZX အမျိုးသမီးများအပြည့်အဝစလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံ Adjustments အီတလီခေါက်ဆွဲဥရောပနိုင်ငံသိုင်းကြိုး Shapewear ထုတ်လုပ်သူ OEM လိမ္မော်ရောင်
အမျိုးသမီးများနေ့လက်အောက်တွင် Dress Adjustments အီတလီခေါက်ဆွဲဥရောပနိုင်ငံသိုင်းကြိုးဒူးရှည်ချော်အောက်ခံ Nightwear များအတွက်အပြည့်အဝစလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံဒါကအင်ျကြီစားဆင်ယင်ပေါ့ပါး၏ဖန်ဆင်းထားသည် breathable ပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းသည်ထည်ထိတွေ့ခံစားမှုချောမွေ့နှင့် comfy ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနွေရာသီ sleeveless လွှဲစားဆင်ယင်၏ပေါ့ပေါ့-အေးမြ Vibe ခုခံတွန်းလှန်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ ၎င်း၏ချစ်စရာကောင်းဒီဇိုင်းကိုသင့်ရဲ့ clavicle စုံလင်သော display ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့ turdy spaghetti သိုင်းကြိုးများနှင့်ဇွန်း-ပုံ neckline ရှိပါတယ်တဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနွေရာသီစားဆင်ယင်ဖြစ်တယ်, ကို double-layer ကိုဒီဇိုင်းကြော့ရှင်းတဲ့အသိကထပ်ပြောသည်နှင့်မှတဆင့်ကြည့်ရှုမည်မဟုတ်။ ဂန္ထဝင်ကားပုံစံ: အဆိုပါဖြောင့်စတိုင်ကပိုကလူရဲ့ကိန်းဂဏန်းများအဘို့အသင့်လျော်သည် ဖြစ်. , အခြေခံရပ်ဆိုင်းထားကမ်းခြေအဖုံး-up, ပိုပြီးအခါသမယများအတွက်စုံလင်သည်။
ဒီဇိုင်း0န်ဆောင်မှုများ /7ရက်ကြာမြန်ဆန်သော protecting / presult size ထုတ်ကုန် / သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးဆေးဆိုးခြင်း / ပုဂ္ဂလိကလိုဂိုပုံနှိပ်ခြင်း / အမြန်ပေးပို့ခြင်း,
wanzhanxing အဝတ် co ။ Ltd ။ BSCI အသိအမှတ်ပြုစက်ရုံဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကမ္ဘာ့အဆင့်မီဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေါင်းစပ်ရန်အတွက်ပရီမီယံကင်းသောပုံသဏ္ about ာရီပုံပြင်များ, အခြေခံကျသော0တ်စုံ, ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွမ်းကျင်မှုဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့နှင့်အတူဒီဇိုင်းနှင့်အညီဒီဇိုင်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုကိုပေး။
ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်အားလုံးသည်ပတ်0န်းကျင်ကာကွယ်ရေးဆေးဆိုးခြင်းများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်7ရက်ကြာမြန်ဆန်သော profileing နှင့် private logo printing လုပ်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး shapewear ထုတ်လုပ်သူကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကဒီမှာအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပေးပါ, ငါတို့အသင်းမှတစ်စုံတစ် ဦး က 12 နာရီအတွင်းသင့်ဆီသို့ပြန်လာလိမ့်မည်။
စက်ရုံတွင် BSCI အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိသည်။ အဆိုပါချည် Oeko-tex အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိပါတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် RD အဖွဲ့
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်ဖက်ရှင်နှင့်အကောင်းဆုံး shapewear bodysuit ထုတ်ကုန်များကိုဖန်တီးပြီးဖောက်သည်များအတွက်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။
12 လက်မ 12 လက်မ - 19 လက်မ Santoni Machine နှင့်အတူချောမွေ့စွာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားနှင့်အပေါင်းအရွယ်အစားထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
wanzhanxing အဝတ် co ။ Ltd ။
wanzhanxing အဝတ် co ။ Ltd ။ ကျွမ်းကျင်သော shapeweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweweal of ရိယာ 13500 စတုရန်းမီတာ, ကျနော်တို့ OEM ပေးပါပြီ&ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသုံးစွဲသူများအတွက် ODM0န်ဆောင်မှုများ, USA, UK, CA, AU, DE နှင့် KR တို့အကြားဖောက်သည်များထံ
သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အတွက်0န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေစဉ်စက်ရုံသည်ဂေဟစနစ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာအယူအဆကိုအခိုင်အမာဆိုကြသည်။
1. အကြီးတန်းဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်အထူးပြု Shapewewewewewear bodysuit ဒီဇိုင်းနှင့်7ရက်ကြာမြန်မြန်ဆန်ဆန် profecting ကိုအထူးထောက်ပံ့ပေးသည်။
2. ImployGery Sheeamess အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ 12 လက်မ -19 လက်မ Santoni စက်များဖြင့်အီတလီမှတင်သွင်းသော။
3. Nilit အမှတ်တံဆိပ်, Oko-Tex100 အသိအမှတ်ပြု YARN ပေးသွင်းသူနှင့်ပူးပေါင်းပါ။
5. ထုံးစံအတိုင်းအမှတ်တံဆိပ်0န်ဆောင်မှုတွင်လိုဂို, ထုပ်ပိုးခြင်း,
6. Professional Customer Service Team သည်ထိရောက်သော0န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် shapewewewewewear ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ "ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, ထိရောက်မှု, သမာဓိရှိခြင်း" သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏0န်ဆောင်မှုအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကော်ပိုရိတ်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်။
သင့်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ခံတွင်း0င်ရိုးတန်းတူ / လက်ကားရသေ့ဖြူဂါ0ံဓာဗေဒ / ဓလေ့ထုံးစံများ,
WZX ဖုန်မှုန့် - အခမဲ့အစိုဓာတ်ကိုအထောက်အကူပြုဂိုဒေါင် Real Shapeweas ကုမ္ပဏီ
WZX သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံများစွာသို့နိုင်ငံများစွာသို့တင်ပို့ရန်အထူးပြုသည့် BSCI စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ0န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်နိုင်ငံပေါင်း 53 နိုင်ငံရှိလက်ကားရောင်းသူများနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များပါ0င်သည့်0န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးရှိသည်။ဗွီဒီယိုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ၏နေ့စဉ်ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ သိုလှောင်ရုံသည်ဖုန်မှုန့်ကင်းစင်ပြီးအစိုဓာတ်ကိုအထောက်အထားဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးမှုအားလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါ၎င်းတို့အားထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်ဤဌာနသို့၎င်းတို့အားပေးပို့လိမ့်မည်။သင်သည်အမျိုးသမီးများ၏ shapewear, အတွင်းခံအဝတ်အစားသို့မဟုတ်သားဖွားစက်များထုတ်လုပ်သူကိုရှာဖွေနေပါသလား။နောက်တဖန်မကြည့်ပါနှင့်။ မင်းမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်။
ချောမွေ့စွာကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ WZX သံလုပ်ငန်းစဉ်
WZX ချောမွေ့စွာအတွင်းခံအဝတ်အစားထုတ်လုပ်သူစက်ရုံတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ထိပ်တန်း Shapewear ကုမ္ပဏီများနှင့်လက်ကား Shapewear ပေးသွင်း။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းသံအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာခက်ခဲအလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါသည်, သံလုပ်ငန်းစဉ်၏ဗီဒီယိုဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shapewear, အတွင်းခံ, activewear နှင့်သားဖွားထုတ်ကုန်များအတွက်အလွန်အခြေခံနမူနာဖြစ်စဉ်ကိုရှိသည်။ကျနော်တို့ထုံးစံဒီဇိုင်းအဖြစ်ထုံးစံနမူနာဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့်တစ်နေရာတည်းမှာအမှတ်တံဆိပ်ဝန်ဆောင်မှုပေး။အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်အပေါ်ထားခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်မှုရတဲ့စေသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအောင်မြင်မှုရရှိရန်ချင်ပါတယ်။
WZX နမူနာဒီဇိုင်း Machine OEM OEM OMM ODMENT ORDERGEY ထုတ်လုပ်သူ
သင်၏ဒီဇိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အတွင်းရှိမဟုတ်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်ဒီဇိုင်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။ အကယ်. ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသောပစ္စည်းဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုးကားချက်များကိုလက်ခံပါကနောက်တစ်ဆင့်မှာနမူနာလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စားဖိုမှူးသည် Process Programming နှင့်အတူကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပရိုဂရမ်ကိုပရိုဂရမ်နှင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။လက်ကား Professional က Shapewear ထုတ်လုပ်သူများ, လက်ကား Shapewear ပေးသွင်း, WZX ချောမွေ့စွာအတွင်းခံအဝတ်အစားထုတ်လုပ်သူကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအဆက်အသွယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သက်သောအဘို့, ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနဲ့နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းအာမခံ!
WZX မြန်ကောင်းပက်ကေ့ Prodessional ထုတ်လုပ်သူကယ်ယူ
ကျနော်တို့က high-quality စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များကိုအထူးပြုတဲ့သူတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းပါတယ်။အဆိုပါထုပ်ပိုးဌာနက 70 ကျော်အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများပါဝင်သည်။အားလုံးကုန်ပစ္စည်းများကုန်ပစ္စည်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသေချာစေရန်အားလုံးဘောငျကုန်ပစ္စည်းများမသတ္တုထုတ်ကုန်ရှိပါတယ်ကြောင်းသေချာစေရန်ဘောငျမီအပ်စစ်ဆေးရေးကောက်ယူလိမ့်မည်။အမိန့်ထုတ်လုပ်မှု, ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ယက်လုပ်ခြင်းနည်းပညာ, နှင့်စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု: ကျနော်တို့ယက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏လူအပေါင်းတို့ရှုထောင့်စုံလင်ဖြေရှင်းချက်ရှိသည်။wear မှအဆင်ပြေမယ့်လက်ကား Shapewear ထုတ်လုပ်သူများ, အဘယ်သူမျှထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း, လက္ကားများအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းအဖြစ်။ရုံစုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှအခမဲ့ခံစား!